संयुक्त राज्य अमेरिका मा व्हीलचेयर | Karman® व्हीलचेयर
हल्का व्हीलचेयर, रिटेल, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर समाचार, व्हीलचेयर यात्रा
प्रकाशित जनवरी 20, 2021 जनवरी 22, 2021 by सीएसआर १1688
अनुमानित पढ्ने समय:4मिनेट
गतिशीलता मा स्वतन्त्रता एक उच्च को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षहरु मध्ये एक हो गुणस्तर अपा dis्गता भएका व्यक्तिको जीवन। मा अधिक जानकारी को लागी तल पढ्नुहोस् व्हीलचेयर अमेरिका मा।
किन व्हीलचेयर हुन् यति महत्त्वपूर्ण?
स्वतन्त्र गतिशीलता गतिशीलता सम्बन्धित उपकरणहरु को एक विस्तृत विविधता संग हासिल गर्न सकिन्छ। जे होस्, कृत्रिम उपकरणहरु, संचालित orthotics, वा जस्ता चीजहरु exoskeleton व्हीलचेयर or बिजुली व्हीलचेयर प्रयोग मा सहायक उपकरणहरु को सबैभन्दा ठूलो भाग बनाउन जारी छ। संयुक्त राज्य अमेरिका संचालित र म्यानुअल गतिशीलता बजार को लागी सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय बजार हो वृद्ध उमेर बच्चा boomers र बढ्दो दीर्घायु को कारण छिटो बढ्ने अनुमान छ।
को वृद्धि मा यो प्रत्याशित वृद्धि व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु, धेरै मानिसहरु को साथ मा माध्यमिक अपाabilities्गता को विकास को लागी जारी राखीएको छ आवश्यकता यस्तो उपकरणहरु को लागी।
कति जनालाई चाहिन्छ व्हीलचेयर अमेरिका मा?
सबैभन्दा भर्खरको अमेरिकी जनगणना डाटा अनुसार, अमेरिका को जनसंख्या को लगभग २० प्रतिशत केहि छन् प्रकार of असक्षम। लगभग १० प्रतिशत एक छ शारीरिक अशक्तता वा गतिशीलता हानि को एक प्रकार।3मिलियन भन्दा धेरै अमेरिकीहरु लाई उपयोग गर्नुहोस् एउटा व्हीलचेयर वा an बिजुली व्हीलचेयर पुरै समय। अपा dis्गता भएका व्यक्तिहरु अमेरिका मा सबैभन्दा ठूलो अल्पसंख्यक समूह हो। यसको मतलब त्यहाँ धेरै छन् व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु कालो, हिस्पैनिक, एशियाई, र LGBTQ+को रूपमा पहिचान गर्ने मानिसहरु भन्दा।
यो अक्षम समुदाय आफैंलाई लाक्षणिक रूपमा अदृश्य मान्दछ। धेरै मानिसहरु, सरकारी अधिकारीहरु, र व्यापार मालिकहरु लाई बनाउँदा उनीहरुलाई विचार गर्दैनन् महत्वपूर्ण निर्णयहरु। हेरचाहको कमीले उनीहरुलाई असर गर्छ क्षमता समुदायहरुको हिस्सा हुन।
गतिशीलता संग मानिसहरु मुद्दाहरु चाहिन्छ यन्त्र को केहि प्रकार उनीहरुलाई वरपर सार्न मद्दत गर्न। त्यो उपकरण एक हुन सक्छ walkerएक मैन्युअल व्हीलचेयर, एक शक्ति व्हीलचेयरवा an इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर. टेक्नोलोजी धेरै छ सुधारिएको। त्यहाँ शक्ति कुर्सीहरु छन् कि एक व्यक्ति को अलमारियों मा आइटम को लागी सजीलो पहुँच को लागी उठाउन सक्छ। यो पनि मानिसहरु संग आँखा को स्तर कुराकानी गर्न मद्दत गर्दछ।
मानिसहरु कसरी यात्रा गर्न सक्छन् व्हीलचेयर बिना अमेरिका मा?
व्हीलचेयर संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक विस्तृत श्रृंखला मा उपलब्ध छन् मूल्य त्यो सामान्यतया एक सय डलर बाट एक हजार सम्म हुन सक्छ। उच्च डलर मोडेलहरु अक्सर गर्न सक्नुहुन्छ प्रदान गर्नुहोस् राम्रो गुण प्रयोगकर्ता को लागी जीवन को आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ।
यदि एक व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता एक भ्यानको स्वामित्व छैन, यो तिनीहरुको सीमित गर्न सक्छ यातायात विकल्प। उनीहरुलाई एक चाहिन्छ पहुँचयोग्य ट्याक्सी, जो दुर्भाग्यवश धेरै छोटो आपूर्ति मा छ, अमेरिका मा धेरै प्रमुख शहरहरुमा पनि। उनीहरु साना शहरहरुमा अस्तित्वमा छैनन्, जब सम्म एक स्वतन्त्र ठेकेदारले उनीहरुलाई दान गर्दैनन् पहुँचयोग्य भ्यान
सार्वजनिक यातायात छ अर्को विधि व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै व्यावहारिक कारणहरु को लागी, न्यूयोर्क मेट्रो प्रणाली को लागी सीमा बाहिर छ व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु। स्टेशनहरु को एक मुट्ठी मात्र प्लेटफर्म को लिफ्ट छ, र अक्सर ती लिफ्टहरु काम गर्दैनन्। धेरै ठूला शहरहरु प्रदान गर्न मा एक महान काम गरीरहेको छ पहुँचयोग्य को लागी बसहरु व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु, तर केहि बस स्टपहरु नजिकै फुटपाथ मा सुरक्षा रोल छैन।
आफ्नो गन्तव्य मा निर्भर गर्दछ, केहि व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु एक बस मा समय बिताउन वा एक्सचेन्ज बसहरु को लागी मात्र केहि माईल अगाडि यात्रा गर्न को लागी विभिन्न मार्ग लेआउट को कारण र जब व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु जहाज मा आउन सक्छ। रेल प्रणालीहरु पनि प्रस्ताव गर्दैनन् पहुँचयोग्य यातायात विकल्प सघाउनु व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु रेल स्टप भन्दा बाहिर यात्रा गर्न। दुर्भाग्यवश, समय को एक बहुमत, यो को लागी धेरै गाह्रो छ व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु कहीं जान को लागी र मात्र प्रयास को लायक छैन।
व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु आफ्नो घर बाहिर
S-115 बाहिर को लागी महान व्हीलचेयर
यसको अलावा यातायात, त्यहाँ गतिशीलता कारणहरु को कमी को लागी धेरै धेरै कारणहरु छन्। मुख्य एक जाँदै छ कि धेरै भवनहरु र व्यवसायहरु को लागी प्रवेश सजीलो छैन पहुँचयोग्य। धेरै फुटपाथहरु छन् असम्भव विभिन्न कारणहरु को लागी, उनीहरु bumpy र असमान सहित पार गर्न। एकदम धेरै व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु घोर गरिबी मा बस्छन् र गर्न सक्ने कुनै वित्त छैन प्रदान उनीहरूसँग यातायात। केहि मानिसहरु जो प्रयोग गर्छन् व्हीलचेयर हुन सक्छ चिकित्सा अवस्थाहरू कि केहि समस्याहरु को कारण हुन सक्छ जब उनीहरु शान्ति र आफ्नै घर को आराम छोड्न सक्छन्। पुरानो दुखाइ, गम्भीर थकान, र मानसिक अशांति जस्ता रोगहरु सार्वजनिक थकाईलाग्दो बाहिर जान्छन्। सार्वजनिक शौचालय को दुर्गमता एक परीक्षा हुन सक्छ।
प्रत्येक भवन मा मानक आकार को ढोका छैन। तेसैले, यदि तपाइँ एक मा हुनुहुन्छ व्हीलचेयर, तपाइँ प्राय फसिएको वा एक वा अन्य ढोका वा प्रवेश द्वार मा फस्न को जोखिम मा हुनुहुन्छ। यो प्राय सार्वजनिक भवनहरु को शौचालय मा हुन्छ। शौचालय पनि गरे लागि व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु लाई धेरै साँघुरो ढोका छ। तेसैले, संकीर्ण कि छैन व्हीलचेयर सजीलै पार गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि ढोका वसन्त टिका संग सुसज्जित छ, तब तपाइँ गर्नुहुन्छ आवश्यक छ मार्फत पारित गर्न मद्दत।
हामी आशा गर्दछौं कि यस विशेष मुद्दा मा परिवर्तन हुनेछ कि निरन्तर विकास लाई उत्तेजित गर्दछ। हामी एउटै व्यापक लक्ष्य को लागी सँगै काम गर्नु पर्छ व्हीलचेयर मद्दत प्रयोगकर्ताहरु। कार्यहरु लाई उनीहरुको उपकरणहरुमा पूर्ण स्वतन्त्र र अत्यधिक कार्यात्मक बन्न मद्दत गर्न को लागी लिनु पर्छ। उनीहरु संग सम्बन्धित माध्यमिक जटिलताहरु बाट सुरक्षित हुनु पर्छ व्हीलचेयर प्रयोग गर्नुहोस्, समाजमा पूर्ण रूपमा एकीकृत हुनुहोस्, र सक्रिय रहनुहोस् र स्वस्थ जीवनशैली।
ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरु को लागी तपाइँको देश कती मैत्रीपूर्ण छ?
यातायात र पहुँच
स्कूल बस फ्लिप, व्हीलचेयर-बाध्य विद्यार्थी घाइते
युके: बस कम्पनीहरु 'आवश्यक छैन' घुमक्कड संग आमा बुबा ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु को लागी बाटो बनाउन को लागी
ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरुको सामना गर्ने समस्याहरु के के हुन्?
यो प्रविष्टि मा पोस्ट हल्का व्हीलचेयर, रिटेल, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर समाचार, व्हीलचेयर यात्रा र ट्याग असक्षम, हल्का व्हीलचेयर, गतिशीलता, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर समाचार, व्हीलचेयर.